Condor Airlines waxay dib u bilawday duulimaadkeedii Jasiiradaha Jannada ee Seychelles
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Condor Airlines waxay dib u bilawday duulimaadkeedii Jasiiradaha Jannada ee Seychelles
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Condor Airlines oo ku soo laabatay Seychelles
Diyaaraddii Condor Airline ee Boeing 767/300 ayaa soo caga dhigatay Gegida Diyaaradaha Caalamiga ee Seychelles 0620 subaxnimadii Sabtida, Oktoobar 2, 2021, halkaas oo markii ay ku laabatay jasiiradaha jannada lagu soo dhoweeyay salaanta canon biyaha.
Duulimaadkii ugu horreeyey ee xilli -ciyaareedka ee Condor wuxuu ku aaday jasiiradaha Seychelles wuxuu saarnaa 164 rakaab ah.
Rakaabkii ayaa mid walba helay qayb ka mid ah qalbi diiran oo soo dhawaynaya xusuus ka timid Waaxda Dalxiiska waxaana lagu maaweeliyay muusig dhaqameed toos ah.
Suuqa Jarmalka waa mid ka mid ah suuqyada isha ugu waxqabadka wanaagsan ee Seychelles.
Waxay dib uga bilaabaysaa duulimaadyadeedii aan joogsiga lahayn Frankfurt, Condor duulimaadkeedii ugu horreeyay ee xilli-ciyaareedka Seychelles siday 164 rakaab ah oo qaabilay qayb ka mid ah quluubta diirran ayaa soo dhawaynaysa xusuus ka timid Waaxda Dalxiiska waxaana lagu maaweeliyay muusig dhaqameed toos ah.
Soo -jeedinta imaanshaha diyaaradda iyo in la salaamo rakaabkii 164 markii ay ka dageen, Agaasimaha Guud ee Waaxda Dalxiiska ee Suuqgeynta Meesha, Marwo Bernadette Willemin, ayaa sheegtay in dib -u -bilaabidda adeegyadeeda, Condor uu ku biirayo shirkadaha kale ee duulimaadyada ee ka qayb qaadanaya soo kabashada warshadaha dalxiiska iyo dhaqaalaha jasiiradaha.
“Markii dib loo bilaabay adeegyadeedii, Condor wuxuu ku biirayaa 12 shirkadood oo kale. Xaqiiqdii waxay na siineysaa farxad weyn inaan aragno lamaane kale oo diyaaradeed oo ku soo laabtay xeebaheena. Duulimaad toos ah oo ka yimaadda magaalo reer Yurub ah had iyo jeer waa qiimo lagu daray meesha loo socdo. Tani waa a talaabo weyn oo soo kabashadeena ah gaar ahaan maadaama suuqa Jarmalku uu ka mid yahay suuqyada isha ee ugu waxqabadka wanaagsan Seychelles. Dib -u -bilaabashada duulimaadyadu waxay ku soo beegan tahay waqti ku habboon sidoo kale dowladda Jarmalku waxay fududeyneysaa shuruudaha safarka ee muwaadiniinta Jarmalka iyo dadka u safraya Seychelles, ”ayay tiri Mrs. Willemin.
Mr. Ralf Teckentrup, Sarkaalka Sare ee Condor, oo muujinaya kalsoonida uu ku qabo goobta, ayaa yiri, “Seychelles oo ku taal Badweynta Hindiya waxaa iska leh jadwalka duulimaadka Condor waana meel caan ku ah martidayada. Jasiiraduhu waxay ku farxaan xeebaha u gaarka ah, reef reral reefs iyo kaymaha roobka waxaan aad u rajaynaynaa inaan martidayada u duulno fasax kadib muddo dheer oo warderlust ah. Muddo dheer ayaan si guul leh ula shaqaynaynay dalxiiska Seychelles si aan ugu suurtagelinno martidayada inay ku raaxaystaan ​​fasaxa riyadooda. ”
Dalxiiska Seychelles wuxuu la shaqeyn doonaa shirkadaha diyaaradaha, la -hawlgalayaasha warshadaha safarka, warbaahinta iyo sidoo kale inay xoojiyaan ololahooda macaamilka si ay ugu soo celiyaan martida suuqyadeeda ilaha muhiimka ah. “Dadaalladeennu hadda waxay ku wajahan yihiin sidii aan dib ugu soo celin lahayn booqdayaashii Jarmalka iyo waddamada deriska ah. Imaatinka Condor, waxaan si xamaasad leh u sugeynaa kororka tirada imaanshaha booqdayaasha, ”ayay tiri Marwo Willemin.
Jarmalku wuxuu ahaa suuqa ugu horreeya ee laga helo Seychelles sannadka 2019, markii bartilmaameedka la diiwaangeliyay 72,509 booqdeyaal ka yimid Jarmalka, ku dhawaad ​​rubuc ka mid ah ayaa ku safray Condor. 8,080 booqde ayaa booqday Seychelles sagaalkii bilood ee ugu horreeyay sannadka 2021 -ka.
Ganacsiyada safarka si ay wax badan ugu kharash gareeyaan tignoolajiyada sanadka soo socda
Dowladda Jarmalka cusub si ay u sharciyeyso marijuana
Booliiska ayaa rasaas ku furay intii ay socdeen rabshadihii ka dhanka ahaa qufulka ee...
45 qof ayaa ku dhimatay shil bas oo ka dhacay Bulgaria
Maalqabeenada kaliya ma awoodaan inay fasax ku qaataan...
Duulimaadyada London Heathrow ee ka imanaya Calgary ee WestJet hadda
Omega Drill ee Israa'iil ayaa tijaabisay dillaaca cusub ...
Sharci -dejiyayaasha Shiinaha ayaa leh maya 'caafimaad -darro' ...
Kia Niro Cusub Oo Soo Bandhigtay Kulankii Ugu Horeeyay Ee Aduunka
IHG, Hilton iyo Marriott waxay ku tiirsan yihiin Benchmark Ahraamta...
Dalxiisayaasha Hindiya ayaa lagu wadaa in si weyn loo raadiyo
Aasaasaha Pizza John Kuma faraxsana Dib-u-habaynta
Shirkad Madow oo Marti galinaysa Haweenka Awooda Tech
WTM London Ma Furan tahay: Xorayn mise Cabsi?
Dalxiiska Uganda ayaa hadda bartilmaameedsanaya maamulayaasha sare ee dhiirigelinta gudaha...
Port Royal ee Jadwalka Cruise Cusub ee Montego Bay